Zvikonzero zvishanu zveB5B Vashambadziri Kupinza Mabhoti Mune Yadzo Dhijitari Kushambadzira Sarudzo | Martech Zone
Mugovera, December 19, 2020 Mugovera, December 19, 2020 Alex Chris
Iyo internet iri nyore inotsanangura bots kuva software zvishandiso izvo zvinomhanyisa zvoga mabasa emakambani pamusoro peiyo internet.
Mabhoti anga aripo kwenguva yakati rebei izvozvi, uye akachinja kubva pane zvavaimbove. Mabhoti ikozvino akapihwa basa rekuita akasiyana siyana mabasa eakasiyana runyorwa rwemaindasitiri. Pasinei nekuti tinoziva shanduko here kana kuti kwete, mabhoti chikamu chakakosha che marketing mix parizvino.
Mabhoti anopa mhinduro inoenderana yezvikwata zvinotarisa kudzikisa mitengo uye nekuvandudza mashandiro. Kana iwe tanga bhizinesi repamhepo uye pinda mukushambadzira kwedhijitari, unogona kupedzisira usingazivi uchishandisa yakawanda kushambadzira, kusimudzira, kutengesa uye kupindura kupfuura zvaunofanira. Mabhoti anodhura zvakanyanya kumisikidza uye anogona kuve akarongwa.
Nekuda kwekuita kwavo nyore uye kwekupedzisira kubatsirwa, kushambadzira bots inzira inozivikanwa ye michina yevatengesi nhasi. Bhoti dzinongova yako yekutengesa toy iyo inogona kuve yakagadzirirwa kuita chero basa raunoda kubva kwavari.
Kukanganisa kwevanhu kuderedzwa uye mashandiro anoshanda kutenderera wachi anovimbiswa kuburikidza nekushandisa bhoti.
Uri kutsvaga nzira dzekushandisa yako digital kushambadzira mushandirapamwe uye kudzikisira zvikanganiso?
Iwe unofuridzirwa nezvakanaka izvo bots zvinogona kupa?
Kana hongu, saka iwe uri pane iyo chaiyo peji.
Muchikamu chino tinotarisa nzira dzinogona kuitika vatengesi veB2B vangateedzere kupinza bots mukati medhi yavo yedhijitari yekushambadzira.
Verenga kuburikidza nechinyorwa ichi uye sarudza yako modus operandi yeiyo inoshanda uye ramangwana risingadhuri.
Chikonzero 1: Shandisa Bots SeTuru Yekutaurirana nevashanyi
Ichi ndicho chimwe cheakanyanya kunyorwa uye akakurumbira bot zviito zvekusarudza. Maitiro acho anogona kutora huwandu hwakawanda hwebasa kutakura kubva pamaoko ako uye anogona kukugadzirira iwe mabhenefiti ari kuuya nenzira yako.
Dhijitari kushambadzira yakachinja nzira mabrands ekutaurirana nevatengi kekutanga.
Kutaurirana kumeso nekutarisana hakusi kujairika zvekare, uye mabhizinesi anoisa yavo yekutanga online online kuburikidza nemaonero ewebhusaiti yavo uye kuburikidza nezviri mukati zviripo pairi.
Kana vatengi vatanga kuuya kuwebsite yako, havangodi chete iwo maficha akakodzera uye aesthetics, asi vanodawo ruzivo rwese rwakakodzera rwunopihwa kwavari.
Muchidimbu, ivo vachazoda mhinduro dzezvigadzirwa uye masevhisi aunopa, pamwe chete nechero ruzivo rwezvinodiwa chero zvaderedzwa kana promos. Kutadza kwako kuvapa mhinduro idzi zvinoreva kuti iwe unogona kunge warasikirwa nemutengi.
Kubatsira vese vangangove vatengi chinhu chakakosha icho chinogona kuve chakaoma kuchengetedza uye kubata kana iwe uine diki yekutengesa kana timu yekutsigira.
Zvakare, timu yako ichave yakasarudza maawa ekushanda, mushure meizvozvo vatengi vacho vangadai vasina chero munhu aripo kuti vapindure mibvunzo yavo.
Kugovera vashandi vako mumaawa akasiyana ekushanda zvinogona kureva kuti uchafanirwa kudzikisa masimba aripo panguva yakatarwa.
Izvi zvinodzivirira kushanda zvakanaka uye zvinokupa iwe isingakwanise kubata iko kupinda kwevatengi vari kutsvaga kubvunza mibvunzo.
Zvinogona kuuya sekushamisika kune vazhinji vemazuva ano vatengesi, asi vatengi vanokoshesa hurukuro yekurarama inopindura mibvunzo yavo.
Ongororo ichangoburwa neEconsultancy yakawana kuti ndoda 60 muzana vanhu vanosarudza mhenyu kutaura pawebhusaiti.
Unogona kuwedzera kugadzira mameseji kuburikidza nemabhoti akawedzeredzwa nekushanda pamhinduro.
Bvunza mibvunzo uye gadzira mhinduro dzinoenderana neyako yekumaka uye chigadzirwa chigadzirwa.
Vanhu kashoma kuti vataurirane neyakaomarara bot isinganyatso kuvagamuchira. Iwe unogona kugadzira yako bot kunyangwe kugamuchirwa nekuipa iyo ipikicha pikicha uye yekuratidzira pikicha.
Izvi zvinowedzerwa zvinowedzera kutaurirana pakati pebhoti rako nevatengi nekuita kuti riwedzere kudyidzana.
Kutaura nezve kudyidzana, Sephora chatbot muenzaniso wakanaka webhodhi inopindirana zvakanaka nevatengi. Izwi rinoshandiswa ne bot riri kuita uye rinobatsira vatengi kusimbisa dhiri ravo.
Reason 2: Use Bots to Sefa kuburikidza Nekutungamira Kwako
Mutungamiri wekutungamira ibasa rakaoma kune mamaneja uye ekushambadzira zvikwata manejimendi. Maitiro ese akavakirwa pamasikirwo ako nekutonga.
Senhengo yechikwata chako chekushambadzira, unofanirwa kuona kuti wafona zvakanaka nezve izvo zvinotungamira mukuteedzera zvakanyanya, uye izvo zvekudonha.
Kubudikidza nekushandisa chatbots, iwe unogona kuwedzera yakawanda yakawanda rubatso kune idzi mafoni. Maitiro anogona kuratidza kuve asiri iwo, asi iyo analytics inomhanya neye chat bots kuti vakwanise kutungamira kazhinji kacho inenge isiriyo.
Fungidzira mutengi mutsva achiuya kune yako webhusaiti webhusaiti. Dzimwe dzinogona kunge dziri dzekutenga pamahwindo, vamwe vanogona kunge vachinyatsofarira.
Kuchengeta masimba uye huwandu hwevatengi vako mupfungwa, unogona kuronga runyorwa rwemibvunzo inonakidza kuti uone kana mutengi wako ari mukati me sales salesnel kana kwete.
Mhinduro dzakapihwa kumibvunzo iyi dzichakubatsira iwe kuona zvinotungamira zvinofanirwa kuteedzerwa.
Iko kune akarongwa bots anowanikwa anoita basa iri kwauri. Aya mabhoti anobatsira kugadzirira mibvunzo uye voongorora mhinduro dzavanopihwa kuti vaone kana lead ichiteerwa kana kwete. Driftbot naDrift ndiyo inotungamira sarudzo pano kana iwe uri kutsvaga iyi mhando ye software.
Nepo mabhoti achigona kuita basa rakanaka chaizvo mukukodzera nekusimudzira kutungamira, nzira yakanakisa yekugadzirisa maitiro ndeyekuwedzera kubata kwevanhu panopera chibvumirano.
Iyo yakanakisa nzira yekumberi ndeyekubvumira bots kusimudzira uye kukodzera kutungamira uyezve kuve neanhanho yemunhu mukati apo chibvumirano chave kuda kuvhara.
Maitiro acho anogona kurongedzwa kutsanangura yako yedhijitari yekutengesa zano yenguva inouya. Zviri nyore uye zvinokohwa iwe mibairo.
Reason 3: Shandisa Bots Senzira Yekuita Yega Yewe Mushandisi Chiitiko
Kutsva kutsva kwakawana izvo 71 muzana yevatengi vese vanosarudza zvakagadziriswa kutengesa nzira.
Muchokwadi, vatengi vanorarama uye vanofira kuzviita, sezvo ichiisa iwo mwenje pavari. Kwemakore, zvigadzirwa zvave zvichitengesa izvo zvavanowana zviri nyore, zvisinei iwo mafungu akachinja uye yave nguva yekuti vatengi vaone izvo zvinotengeswa uye zvinotengeswa kwavari.
Kuchengeta mupfungwa kwevatengi kupenga pakuita zvemunhu, iwe unofanirwa kuzvitora wega kuti uvape izvo kutarisisa. Nekushandisa kwemabhoti, iwe unogona kupa mhinduro dzevatengi-centric kune vashanyi vako.
CNN muenzaniso weiyo yepamusoro nhau chiteshi iyo inotumira yakasarudzika nhau feeds kune vashandisi vakasiyana zvichibva pane zvavanofarira uye nesarudzo.
Izvi zvinogadzira nzvimbo yakanaka uye zvinobatsira vatengi kuvimba nemubatsiri wenhau kune ese nhau anoenderana navo.
Yakaumbwa iri rinotungamira online AI mhinduro iyo inobatsira real estate zvikwata, brokerage uye vamiririri kukudziridza zvakaenderana mhinduro kune avo vatengi.
Iyo chatbot iri pasi peSystem inoenda izita raAisa Holmes uye inoshanda sevatengesi. Aisa Holmes anozivisa vatengi uye anopindura mibvunzo yavo nezwi rakasarudzika.
Reason 4: Use Bots for Zvinobudirira Zvemagariro Ekutaurirana
Iwe unogona zvakare kushandisa bots pane yako yemagariro midhiya kuti upindure nekudyidzana nevatengi nekuzvipira kwakafanana uye kuita sezvaungaita iwe webhusaiti yako.
Kune akawanda chatbots anowanikwa ekurunga mameseji ako paSlack neFacebook Messenger. Zvemagariro midhiya bots anonyanya kushandiswa kutungamira chizvarwa, uye anoshanda icho chinangwa zvakanaka.
Chikonzero 5: Shandisa Bots Senzira Yekusarudza Demographics
Bhuti dzinopa yakanakisa nzira yekudyidzana yekuti iwe uwane huwandu hunodiwa kubva kune vatengi vako, pasina kuvakumbira kuti vazadze marefu uye anofinha mafomu.
Iyo bot inopindirana nevatengi vako mune yakasarudzika nzira uye inogadzira iyo ruzivo rwakakodzera kune avo huwandu hwevanhu.
Ruzivo urwu runobva rwashandiswa kupa maitiro ekutengesa akasarudzika kune vatengi. Aya mazano ekutengesa inogona kuve nzira yakanaka yekuunza vatengi vatsva vechiratidzo chako.
Chatbot inopa nzvimbo yakachengeteka yevatengi vazhinji kwavanogona kugovana ruzivo rwakanangana nehuwandu hwavo, vasina kunzwa kusagadzikana nezvazvo.
Iwe unogona zvakare kushandisa uyu mukana kuunza mune vatsva vatengi uye uwane data rine hukama nehuwandu hwevanhu kubva kune vekare.
Parizvino isu tinotarisira kuti iwe unzwisise kukosha kwemachatbots uye nemabatiro aungaaita iwo mukati meyako nzira yekutengesa. Dhijitari kushambadzira ndeyekungove wakasununguka uye kugadzira zvisungo nevatengi vako.
Chat bots anokupa iwo iwo chete iwo mukana, sezvo iwo achibvumidza iwe kuti uongorore mahoroni ayo angadai angadai akave akare kure-kutorwa kwauri.
Zvikwata zvekushambadzira zvinogona kushanda ruoko-mu-ruoko nemabhoti kuti vagadzire rinotyisa dijitari rekushambadzira zano
Iyo yekudyidzana uye makumi maviri nemasere sevhisi yemabhoti inomhanya mushe nehunyanzvi hwevashandi vako vevanhu. Kubudikidza neiyi amalgam iwe unozokwanisa kukohwa mibairo yemakuru mikana yekutengesa uye kushambadzira otomatiki.
Uri kutsvaga kuedza rombo rako pakusanganisa bots mukati meako marongero zano?
Kana hongu, wobva wataura pazasi kuti utiudze kuti matekinoroji edu angakubatsira sei murwendo runouya.
Tags: b2bbotschat chat botsmutungamiri wechizvarwakutungamira chinzvimbotungamira kukodzeravanokodzera kutungamira
Alex ndiye Dhijitari Kushambadzira maneja pa Reliablesoft, yedhijitari yekushambadzira agency inopa SEO uye dijitari kushambadzira masevhisi kubvira 2002.